Ubuqhetseba "bokuhamba" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje siza kufunda thatha uhambo naphi na emhlabeni ofuna, kodwa olu hambo luya kuba ngaphandle kokuhamba Ukusuka ekhaya.
Kukhe kwenzeka kuwe ukuba ufuna ukudlala ihlaya kumhlobo wakho kwaye bacinga ukuba uthatha uhambo? Ewe, ukudlala iziqhulo, okanye ukuseta ifoto sikuzisa esi sifundo. Hamba kwihlabathi, okanye uhambe ngexesha ngamanyathelo nje ambalwa nge-Photoshop.
Kuqala kufuneka khetha iifoto ezimbini Ezi zii-angles ezifanayo, oku kukuthintela ukwenza umfanekiso ongalinganiyo okanye ujongeka ububuxoki kakhulu kuba sibeke umfanekiso ongasemva othathwe emazantsi kunye nomfanekiso ophambili onekona echasene ngokupheleleyo. Ke ngoko thina sikuhlisile ukungabonakali ukusuka kumfanekiso ongentla ukuqinisekisa ukuba ii-angles ziyahambelana Kwaye ekugqibeleni sifezekisa iziphumo ezigqibeleleyo, ukuba azifezekanga.
Emva koko sikhetha ingxowa-mali yomfanekiso okhoyo, siyaqinisekisa ukuba umda ucocekile ngokunqakraza "Cokisa umda" kunye nokulungelelanisa ukhetho lwefestile ezivelelayo ebonakala emva kokucofa apho, kwaye xa sele sinemiphetho ecocekileyo siyayicima.
Ukuqinisekisa ngeenkcukacha ezingcono, sithatha i-eraser enobungakanani obuphakathi, kunye nefuzzy encinci, ukuze sikwazi susa inkunkuma yangasemva ezishiyeke kwimingxunya ethile, okanye ezinye iimpazamo ezingakhange zibonwe kwinqanaba langaphambili.
Nje ukuba sikufumane oku kungekudala, siza kulungisa amaNqanaba alo mfanekiso, ngenxa yoku kufuneka sikhethe uluhlu lwawo. Masiye kwimenyu Umfanekiso-Uhlengahlengiso-Amanqanaba Ukusuka apho sihlengahlengisa ukuthanda kwethu, kufutshane kakhulu nemvelaphi, kokungcono, ngokwemiba ephambili kunye nezithunzi.
Ukulungelelanisa umfanekiso kancinci kancinci, nathi siya kuthi phinda ubeke imibala. Ngenxa yoku singena kwimenyu Umfanekiso-Uhlengahlengiso- Ibhalansi yoMbala, kwaye siphinda sibambe kwakhona ngokwemvelaphi, ukuba yimvelaphi ebluhlaza ngakumbi okanye ibomvu, senza okufanayo nomfanekiso ophambili.
Okokugqibela sinokongeza iinkcukacha ze yongeza isihluzo sombala ukwakheka, koku kufuneka senze i uhlengahlengiso lolungelelwaniso njengoko sibonile kwezinye iitutorials onokuthi uzindwendwele apha, kwi Izidalwa ezikwi-Intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ubuqhetseba «ukuhamba»
Kucace gca kwaye kumnandi. Enkosi. Ndiza kuzama kungekudala !!!!!